Dawlada Itoobiya Oo Canbaaraysay Hadalo Ka Soo Yeedhay Baarlamaanka Dalka Masar Kana Hadashay Arimo Badan | Salaan Media
Dawlada Itoobiya Oo Canbaaraysay Hadalo Ka Soo Yeedhay Baarlamaanka Dalka Masar Kana Hadashay Arimo Badan
June 6, 2013 | Published by: Hamse
June 6,2013 Addis abba (SM)Wasaarada arrimaha dibada ee Itoobiya ayaa shaaca a qaaday in xubno kamid ah baarlamaanka Masar ku kaceen falal dhan ka ah Wasaarada arrimaha dibada ee Itoobiya ayaa shaaca a qaaday in xubno kamid ah baarlamaanka Masar ku kaceen falal dhan ka ah xidhiidhka labada dal ee ku dhisan wax loogu yeedhay in si simman wax loo wadaago. Itoobiya ayaa xustay in weedhaha ka soo yeedhay xubnaha baarlaanka ayna ahayn kuwo caawinaya in labada dal xidhiidh wax wadaag ah yeeshaan.
War-murtiyeed loogu talagalay saaxafada ayey Itoobiya ku sheegtay in hadalada xubnaha qaarkood yihiin kuwo abuuraya qas iyo gacan ka hadal.
Siyiisiinta Masar qaarkood ayaa dhawaan laga daawada TV-ga dalka mar ay ka xaajoonayaan saamaynta oo biyo xidhka Itoobiya ku yeelan karo biyaha ay Masar ka hesho wabiga Nile. Siyaasiinta ayaa cadho ka muujiyey biyo-xidheenka ayaga oo soo jeediyey falal dhan ka ah Itoobiya.
Itoobiya ayaa ku celisay qorshaheeda ah in wadamada wabiga Nile uu maro ay si siman u wadaagan biyahaas iyada oo intaa ku dartay in taas lagu gaadhi karin cadaawad.
Xubnaha baarlamaanka qaarkood ayaa ku dooday in la carqaladiyo dhismaha biyo-xidheenka Itoobiya iyada oo la adeegsanayo wax kasta oo arrinta sahli kara. Itoobiya ayaa aragitada noocaas ah ku tilmaantay xilkisnimo la’aan iyo mid aan waxtar lahayn.
War-murtiyeedka Itoobiya ayaa lagu soo ebyey in dalkaasi daacad ka yahay xidhiidh wacan oo uu la wadaago dalka Masar kaaso kor u qaadaya iskaashiga labada wadan iyo shacab,
Salaanmedia Addis abba